အမှတ် (၉) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း မော်လမြိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မွန်ပြည်နယ်ရှိ အများနှင့်ဆိုင်သော အထက်တန်းကျောင်း
အမှတ် (၉) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း မော်လမြိုင် (အ.ထ.က(၉) မော်လမြိုင်) သည် မော်လမြိုင်မြို့၊ ပန်းဘဲတန်းလမ်းတွင် တည်ရှိသောကျောင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ်က ရှင်မဟာ ဗုဒ္ဓဃောသ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်း (Shin Maha Buddhaghosa National School) ဟု လူသိများသည်။ ယင်းကျောင်းမှာ ကိုလိုနီခေတ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူငယ်များ အတွက် တည်ထောင်ခဲ့သော ကျောင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားကျောင်းများ မပေါ်ပေါက်မီ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာကပင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ကျောင်းဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာပြည်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းများ အနက် အဦးဆုံး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ကျောင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအသုံးပြုသင်ကြားလျက်ရှိသည်။ သူငယ်တန်းမှ ဒဿမတန်းအထိ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ ဒဿမတန်းအောင်ချက်မှာ ပျမ်းမျှ ၇၅% ရှိ၍ မွန်ပြည်နယ်တွင် အောင်ချက်အကောင်းဆုံးအဆင့် ၁ မှ ၅ အတွင်း နှစ်စဉ်ဝင်ခဲ့သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
ဂျီစီဘီအေ မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်လှိုင်၏ ဖခင် မော်လမြိုင်မြို့သစ်ကုန်သည် သူဌေး ဦးသာညှင်းက ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ငွေကြေး မ တည် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ကျောင်းကို စတင် တည်ထောင်သူများတွင် ဦးကျော်ထွန်း (နောင်တွင် ကျက်သရေဆောင် ရွှေစလွယ်ရ အရေးပိုင်မင်း)သည် တဦး အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ဦးကျော်ထွန်းသည် ထိုရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသကျောင်း စတင် ဖွင့်လှစ်သောနေ့တွင် ဖတ်ကြားရန် အတွက် ရတုကိုပင် ရေးသားစီကုံး ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
စာရေးဆရာ ဓူဝံ - ညွှန်ကြားရေးဝန်၊ သတင်းစာဆရာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ် (၁၉၄၆)
↑ The New Light of Myanmar ( Sunday, 21 November 1999)။ The New Light of Myanmar (21 November 1999)။ November 17, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ N. R. Phatak (1968). Source Material foraHistory of the Freedom Movement in India: pt. 1. Mahatma Gandhi (1915-1922). Government Central Press, India. p. 423.
↑ ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်သမိုင်း(မော်လမြိုင်သမိုင်း). p. 114
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမှတ်_(၉)_အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း_မော်လမြိုင်&oldid=655512" မှ ရယူရန်
၁၉ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။